Fa Wo Ho Sie Onyankopɔn Dɔ Mu - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
2 Yɛte mmere a basabasayɛ wom mu. Sɛe ara na wiase nsɛm tebea resɛe. Nanso hintabea pa bi wɔ hɔ, guankɔbea a ebetumi abɔ yɛn ho ban afi adebɔne biara a ebetumi asɛe yɛn korakora ho. Ɛyɛ dɛn? Hyɛ nea Bible ka yi nsow: “Mise [Yehowa, NW ] sɛ: Me guankɔbea ne m’abankɛse, me Nyankopɔn a mede me ho meto wo so.”—Dwom 91:2.
17 Mma wo werɛ mfi sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ Ahenni asɛmpaka adwuma no ntɛm so. Bible ka sɛ: “Ka asɛm no, gyina mu denneennen.” (2 Timoteo 4:2) Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛyɛ eyi ntɛm so nnɛ? Onyankopɔn Asɛm ka kyerɛ yɛn sɛ: “[Yehowa, NW ] da kɛse no abɛn, abɛn na ɛreba ntɛm.” (Sefania 1:14) Yiw, ɛrenkyɛ koraa Yehowa bɛsɛe wiase a ɛwɔ hɔ yi. Ɛsɛ sɛ yɛbɔ nkurɔfo kɔkɔ! Ɛsɛ sɛ wohu sɛ ɛnnɛ ne bere a ɛsɛ sɛ wɔpaw Yehowa sɛ wɔn Sodifo. Awiei no ‘renka akyiri.’—Habakuk 2:3.
19 Sɛ yɛne Yehowa asomfo foforo bom som noa, yɛhyɛ ɔdɔ ne adamfofa a ɛwɔ asafo no mu no mu den. Esiane sɛ Yehowa hwɛ nea eye wɔ yɛn ho nti, ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛhwɛ suban pa a ɛwɔ afoforo ho. Nhwɛ kwan sɛ wo nuanom Kristofo bɛyɛ wɔn ade pɛpɛɛpɛ. Kae sɛ ɛsono sɛnea obiara anya nimdeɛ wɔ Onyankopɔn som mu akodu, na yɛn mu biara di mfomso. (Kolosefo 3:13) Bɔ mmɔden sɛ wo ne wɔn a wɔdɔ Yehowa yiye no benya adamfofa a emu yɛ den, na wubehu sɛ worenya nkɔso wɔ Onyankopɔn som mu. Yiw, Yehowa a wo ne wo nuanom Kristofo mmarima ne mmea bɛbom asom no no bɛboa wo ma wode wo ho asie Onyankopɔn dɔ mu. Dɛn na Yehowa de hyira wɔn a wofi nokwaredi mu som no na wɔde wɔn ho sie ne dɔ mu no?